Mufananidzo unosvinwa pane izvo zvingave zvitsva Logic Pro X | Ndinobva mac
Chifananidzo chakaburitswa chingave chiri Logic Pro X nyowani
Apple ingadai ichishanda kwenguva yakareba pane yakavandudzwa vhezheni yesoftware inozivikanwa Logic Pro X. Mune ino kesi, pamwe chete neFinal Cut Pro X, ndiwo mapurogiramu anonyanya kushandiswa muchikamu chehunyanzvi chekugadzirisa vhidhiyo uye odhiyo, saka kuvandudzwa kunoitwa neApple kune chokwadi chekugamuchirwa neichi chikamu. Iyo Logic Pro X odhiyo software inowanikwa kune vashandisi veMac muchitoro chekushandisa chekambani yeCupertino asi mutengo weiri wakanyanya kukwirisa uye iri software ine ruzivo rwakanyanya rwekugadzirisa basa.
Logic Pro X skrini yakaburitswa pawebhusaiti yeApple
Zvinotaridza kuti kuburitswa kwakatorwa pawebhusaiti yeApple nekusaziva imo mu chikamu chedzidzo yekambani (iyo isina kupukunyuka vamwe vashandisi vakaitora ndokuigovana nayo mukati Reddit), inoratidza kuti munguva pfupi tichaona nhau mune ino software. Zvinogona kunge kuti nhau dzichasvika munguva pfupi dzichitarisa kuti mavhezheni matsva e software iyi anosvika mwedzi mitatu yega yega asi izvozvi tinofanirwa kumirira.
Izvo zviri pachena ndezvekuti nhau dzakaonekwa mumufananidzo uyu dzatinadzo mumusoro wechinyorwa chino umo 13-inch MacBook Pro ine Logic Pro X inoratidzwa pachiratidziri, unogona kuona zvitsva zvakadai semuenzaniso sarudzo yatinayo muGarageBand yeIOS: Iwo Kurarama zvishwe iyo inokutendera iwe kugadzirisa iyo faira munguva chaiyo. Nekusefa uku, isu tinongofanirwa kumirira kuti vaone pavanopedza kuivhura uye zvinoita sekunge havangatore nguva yakareba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Rumo » Chifananidzo chakaburitswa chingave chiri Logic Pro X nyowani
Iwe unogona kubatsira yako Mac yekuvandudza neiyi Indie chirongwa
Nyowani Patent: Liquid Metal Apple Watch